YEYINTNGE(ကနဒေါ): Thursday, April 18
PSY ၏ Gentleman M/V အား တောင်ကိုရီးယား KBS ရုပ်သံလိုင်း ပိတ်ပင်
Myanmar Consumer Guide's photo.
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Korean Broadcasting Service (KBS) အနေဖြင့် ကမ္ဘာကျော် ကိုရီးယားအဆိုတော် PSY ၏ Music Video အသစ်ဖြစ်သည့် Gentleman အား ထုတ်လွှင့်ပြသခြင်းမှ ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
အကြောင်းမှာ PSY အနေဖြင့် အဆိုပါ M/V ထဲ၌ အများပိုင် ပစ္စည်းများအား ဖျက်ဆီးပြသည့် ရိုက်ကွက်များ ပါဝင်နေခြင်းကြောင့်ဟု ဆိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ယာဉ်မရပ်ရဟု သတ်မှတ်ကန့်သတ်ထားသည့် ကတော့ချွန်များအား လမ်းလျှောက်ရင်း ကန်ကျောက်ခဲ့သည့် ရိုက်ကွက်မှာ အများပြည်သူအား ပြသရန် မသင့်တော်ဟု KBS မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Gentleman သည် ကမ္ဘာကျော် Gagnam Style M/V ၏ အဆက်အဖြစ် ပြီးခဲ့သည့် သတင်းပတ်အတွင်းက YouTube ပေါ်၌ စတင်ပြသခဲ့ပြီး တစ်ပတ်အတွင်း ကြည့်ရှုမှုအကြိမ်ပေါင်း ၁၃၉ သန်း ရှိခဲ့သည်။
အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ် ကိုရီးယားအဆိုတော့ PSY ၏ Gangnam Style M/V သည် ကြည့်ရှုကြိမ်ပေါင်း ၁.၅ ဘီလီယံကျော်ဖြင့် YouTube ပေါ်တွင် သရဖူဆောင်းထားပြီး PSY အားလည်း YouTube ၏ ဘုရင်ဟု ကင်ပွန်းတပ်ထားကြသည်။
BY YeYint Nge ... 4/18/20130comment
ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာ ချပေးထားတဲ့ ခွဲတမ်းက ၁၀ လုံး/လိုချင်သူက လူဦးရေ ရာကျော်ရှိ
CDMA 800 Sim Card တွေ ရပ်ကွက်တွေမှာ ခွဲတမ်းအရ ချပေးပြီး မဲနှိုက်ရမယ် ဆိုပါတယ်.။ မှတ်ပုံတင် သန်းကောင်စာရင်း မိတ္တူတွေ တောင်းပါတယ်.။
ဒီကနေ့ တွေ့ခဲ့ သိခဲ့ရတဲ့ တောင်ဒဂုံ ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာ ချပေးထားတဲ့ ခွဲတမ်းက ၁၀ လုံးပဲ ရှိပါတယ်.။
လိုချင်သူက လူဦးရေ ရာကျော်ရှိနေတယ်။
မဲနှိုက်မယ်ဆိုတော့လည်း ပေါက်လိုပေါက်ငြား ဝိုင်းတင်ကြမှာပါ...။ ပေါက်ပြီး မသုံးဖြစ်တော့လည်း ပြန်ရောင်းရင် ဝယ်မယ့်သူက ရှိနေတယ်။
ဒီတော့ တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးအတွက် လျှောက်လွှာ ၂၀၀ ပဲ တင်ဖြစ်တယ်... လို့ ထားလိုက်ပါတော့။ လျှောက်လွှာ ၁၉၀ ကတော့ အလဟဿ ဖြစ်တော့မယ်။
တယ်လီဖုန်း Sim Card တစ်ခုအတွက် ( သီးသန့် လျှောက်လွှာမပါ) သန်းကောင်စာရင်း မိတ္တူအတွက် A4 စာရွက်တစ်ရွက်နှုန်း + မိတ္တူကူးခ နဲ့ စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်..
လေလွင့်သွားတော့မယ့် A4 စာရွက်ပေါင်းဟာ (တယ်လီဖုန်းအလုံးရေ သုံးသိန်းခွဲ X ၂၀၀) - ၃၅၀၀၀၀ = ......(၆၉) သန်း ၆သိန်း လောက်ရှိနေတော့မယ်..
A4 စာရွက် သန်း၃၀ ကို ကျောင်းသုံး ဖတ်စာအုပ်ရိုက်ပြီး ဝေမယ်ဆိုရင်..
(A4 တစ်ရွက် = စာမျက်နှာ ၄မျက်နှာ။ စာတစ်အုပ် စာမျက်နှာ ၂၀၀ နှုန်းနဲ့ စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ကျောင်းသုံးစာအုပ် အနည်းဆုံး တစ်သန်းကျော်လောက် ရှိနိုင်တယ်)
BY YeYint Nge ... 4/18/2013 1 comment
မြန်မာပြည်သည် ငပွကြီးဆုတံဆိပ်ဟုခေါ်ဆိုနိုင်လောက်သော ချစားညစ်ပတ်မှုအား နိုင်ငံတကာ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သော စစ်တမ်းကောက်ယူရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၃ နိုင်ငံတွင် နံပတ် ၁၈၀ သို့၇ှိသော အဆင့်တွင် သတ်မှတ်ခံရ၏။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အ၀င်ပိုင်းကာလတွင် တိုင်းပြည်တွင် အထွေထွေ ရရှိနေသော ၀င်ငွေများအား မည်သည့်နေရာတွင် သုံးစွဲနေကြောင်း နှမ်းတစေ့မျှစာလောက်ကိုပင် ခြေရာမခံနိုင်သးသော အခြေနေ၀ယ်၊ စစ်အာဏာရှင်ကြီး ဗိုလ်သန်းရွှေမှ ကမ္ဘာတွင် တန်ဘိုးကြီးမားဆုံးဖြစ်သည့် ဘောလုံးအသင်းဖြစ်သော မန်ချက်စတာ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ ဘောလုံးအသင်းကြီးအား အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင် တစ်ထောင်ဖြင့် ၀ယ်ယူရန် စိတ်ကူးယဉ်နေသည်ဟု (The Tribute ) စာစောင်က အောက်ပါအတိုင်း ထောက်ပြပါသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်ကာလကပင် မြန်မာပြည်တွင် ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းပေါင်း ၄၀အား ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်သည့် တန်ဘိုးဂနနှင်ွ စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုခဲ့လေ၏၊ သို့သေည် မည်မျှ၊ မည်ပုံ နှင့် မည်သို့သော ကုမ္မဏီများအား လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီး မည်သို့မည်ပုံ နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေများအား အချိုးကျသတ်မှတ်သုံးစွဲဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မှာ အလွန့်အလွန် လျှိ့ဝှက်နက်နည်းသော အရာအဖြစ် ရှိနေလေသည်ဟု ဘန်ကောက်ပို့စ်က ရေးသားဘူးပါသည်။
ပြင်သစ်မှ တိုတဲလ် ရေနံတူဖေါ်မှု ကုမ္မဏီနှင့် မြန်မာပြည်မှ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့တို့ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် အပြီးသတ် စာချုပ်များချုပ်ဆိုမှု အဆိုအရ တိုတဲလ်ဘက်မှ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ဌာနသို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း ကို ပေးဆောင်ပြီးမှ ရတနာသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်းကြီးအား လုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ရသည်။
နိုင်ငံတကာ ကမ္ဘာ ကုလသမဂ္ဂမှ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ထိုးစစ်ဆင်ခြေမှုန်းနေမှုအား အဆုံးသတ်ပြီး နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့ ရာဇသံချမှတ်ရန်ဆောင်ရွက်မှုအား တရုတ်ပြည်မှ ဗွီဒိုအာဏာဖြင့်ပယ်ချလိုက်ပြီး ၃ရက်ခန့်ကြာသောအခါ တရုတ်ပြည်မှ (တရုတ်ပြည်မြောက်ဖျား ရေနံရှာဖွေရေးကုမ္မဏီ)မှလည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း အား မြန်မာ့ရေနံ သဘာဝ ဌာနအား ဆုကြေးမစ လဒ်ထိုးသည့်အနေဖြင့် ပေးဆောင်ပြီး လက်ရှိ အေဒီ အမှတ် (၁) အားလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိပြီး ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ နောက်ထပ် ၂ သန်း ထပ်မံပေးဆောင်ပြီ အေဒီ (အမှတ် ၈) ရေနံလုပ်ကွက်အား ရယူခဲ့ရသည် ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖ်ါဝါရိလထုတ် South China Morning Post က တစေ့တစောင်း စောင်းမြောင်းထောက်ပြထားပါသည်။
ယခင် စစ်ဗိုလ်မှုးချုပ် သန်းဌေး၏ ဖင်အောက်တွင်၇ှိသော မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့တူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်းသည် တကယ့်ဧရာမ ငွေလုံးငွေရင်းကြီး ထုတ်လုပ်ပေးရာ ဌာနဟု နိုင်ငံတကာ စောင့်ကြည့်သူများက ဆိုကြပြီး၊ ၄င်းတို့မှ ပြည်တွင်း ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့များအားရှာဖွေခြင်း ရေနံနှင် ဂစ် ပိုက်လိုင်းများအား နိုင်ငံခြား ကုမ္မဏီများကိုဖိတ်ခေါ်တည်ဆောက်ခြင်း တာဝန်များကို ကိုင်တွယ်ထားသည် ဟု (အိုင်ဗင်ဟိုး၏ ၀က်ဆိုက်တွင် ရေးသားပါသည်)။
၂၀၀၃ ခုနှစ်၏ ရတနာ သဘာဝဓါတ်ငွေ့အားထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောင်းချရရှိသည့် ၀င်ငွေအားလုံးကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာ့ရေနံလုပ်ငန်းအသင်းစုနာမည်ဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင် ၄ထောင် ဒသမ ၃ ရာအား စင်္ကာပူ ဘန့်တွင်း ပေးသွင်းခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုငွေလုံးငွေရင်းသည် ဦးပိုင်ကုမ္မဏီနှင့် မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ဌာနတို့ မည်သို့ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကို ခြေရာကောက်သိရှိရန် ပြောက်ခြင်းမလှပြောက်နေခဲ့ရပြန်သည်။
According to available gas payment contracts until 2003 for the Yadana gas export to Thailand,
MOGE kept gas payment of 4.3 billion dollars inabank account in Singapore. Whether MOGE or military companies UMEHL and MEC manage this bank account is also unknown.
မြန်မာ စစ်ဘက်မှ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ရောင်းချမှုမှရရှိသည့် ၀င်ငွေများအား စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများဖြစ်သော တဦးချင်းကိုင်တွယ်အသုံးပြုသည့် လက်နက်များ၊ တင့်ကားများ၊ ဝေဟင် ဂျက်ဖိုက်တာများ၊ ဝေမှပျံသန်းပစ်ခတ်သော ဒုံကျဉ်ပစ်လေယာဉ်များ၊ ဝေဟင်ထောက်လှမ်ရေးေ၇ဒါစနစ်များ မြေပြင်လျှပ်ပစ်ဒုံးများ၊တာတိုပစ် ဒုံးများစနစ်များအား အကြီးကျယ်ဝယ်ယူလေ၏။
အဆိုပါ ရတနာ ဓါတ်ငွေ့၏ ထိုင်းနိုင်ငံသို့တင်ပို့သည့် (၁၉၉၈)အတွင်းက ပေးချေငွေများကို ဗိုလ်သန်းရွှေမှ အစ္စရေး မှ (ဒေါ်လာ သန်း ၁၁၀)၊ ယူကရိန်းမှ (ဒေါ်လာ သန်း ၉၀)၊ မြောက်ကိုရီးယားမှ (ဒေါ်လာ သန်း ၂၈၈)၊ ပါကစ္စစတန်မှ (ဒေါ်လာ သန်း ၁၆၅ )၊ စင်္ကာပူမှ (ဒေါ်လာ သန်း၁၆၀) အန္ဒိယမှ ဒေါ်လာ သန်း ၃၁၀၊ ရုရှားမှ ဒေါ်လာ သန်း ၃၄၅ သန်း၊ တရုတ်ပြည်မှ ဒေါ်လာ သန်း ၆၆၀ဖိုး စုစုပေါင်း ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၁ ထောင် ခုနှစ်ရာ ခုနှစ်ဆယ်သုံးသန်းအပြင် ပွဲခ နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ် ဒေါ်လာ သန်း ၄ ရာနီးပါမျှကို ခရိုနီ တေဇအား သုံးစွဲ ကုန်ကျခံခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် မေလတွင် ဗိုလ်သန်းရွှေမှ ရုရှားနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ၁၀ မီဂါဝတ် ထုတ်လုပ်နိုင်သော နူကလီးယားဓါတ်ပေါင်းဖို့တခုအား တည်ဆောက်ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၄၀ တန်စာချုပ်အား ချုပ်ဆိုပေးချေခဲ့သည်ဟု ( Jame Journar)ကထောက်ပြထားပါသည်။
Myanmar military purchases since gas revenues have started to flow include armored personnel carriers, tanks, fighter jets, aircraft, radar systems, surface to- air missiles and short-range air-to-air missile systems. Following the production of gas from the Yadana fields in 1998 and the payment
for the export of that gas to Thailand, the Than Shwe regime sped up military purchases, spending billions for weapons and equipment from China for the worth of 660 million, Russia for the worth of 345 million, India for the worth of 310 million, Singapore for the worth of 184 million , Pakistan for the worth of 165 million , North Korea for the worth of 288 million , Ukraine for the worth of 90 million and Israel for the worth of 110 million. Moreover Myanmar military allows to use broker and transportation allowance for the worth of 400 million to Ta Za. In May, 2007, the Than Shwe regime also signed an agreement with Russia to builda10-megawatt nuclear-research reactor worth of 640 million in Burma.
၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အေးမှ ဥက္ကဌရာထူးဖြင့် ဦးစီးဆောင်ရွက်နေသည့် မြန်မာ့ဦးပိုင် ကုမ္မဏီနှင့် အဆင့် နံပါတ် ၅ နေရာတွင်ရှိသော ဦးရွှေမန်း(သူရ) မြန်မာစစ်တပ်မှ ဗိုလ်ချုပ် တို့ တရုတ်ပြည်၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ရုရှား၊ ယူကရိန်း စသောနိုင်ငံများသို့ လက်နက်များဝယ်ယူရန် မကြာခန ခရီးထွက်နေခဲ့ကြသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဦးရွှေမန်းကပင် ၄င်း၏ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စစ်ဦးစီးအရာရှိတချို့နှင့် အတူ မြောက်ကိုရီးယားသို့ နှစ်နိုင်ငံ စစ်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ခရီးထွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ၄င်း ဦးရွှေမန်းကပင် ရုရှားမှ လျှပ်တပျက်တိုက်လေယာဉ် အစီးပေါင်း ၂၉ စင်းအား အမေ၇ိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၇၂၀ ဖြင့် အပြီးသတ်ဝယ်ယူပြီး အဆုံးသတ်ခဲ့သည်ဟု အမေရိကန် သံရုံးမှ ၄င်း၏ နိုင်ငံခြားရေးဌာနသို့ပေးပို့သော ကြေးနန်းစာတွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
သူခိုးတို့၏ ဘဏ်တိုက်ကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်း/အပိုင်း(၁)
ဓါတ်ပုံရှင်နဲ့ဆိုင်ကယ် သိသူများ ရဲ ထံ ဆက်သွယ်ပေး ကြပါ။
လူထု မောင်ကာဠု's photo.
ကန်တော်ကြီး မြောက်ဖက် ထွက်ပေါက် သဘာဝဥယျာဉ်
ရှေ့မှာ လူသတ်မှု တစ်မှု ည ၁၀:၀၀ နာရီ လောက်မှာဖြစ်သွားပါတယ်။
သေသူ က မိန်းကလေး ၂၅/၂၆ဝန်းကျင် အမည် နေရပ် မသိရသေးပါ
သေသူ အနီးမှာ ဆိုင်ကယ်တစီး တွေ့ ရပါတယ်။ နံပါတ် က ၂၇ယ/၂၇၃၇၆ဖြစ်ပါတယ်။
သတ်သွားသူ က နှစ်ယောက် ထက်ပိုနိူင်ပြီး ကတ္တီပါဘိနပ် သဲကြိုး အပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဓါတ်ပုံရှင်နဲ့ဆိုင်ကယ် သိသူများ ရဲ ထံ ဆက်သွယ်ပေး ကြပါ။
Form :....U Aung Lawer
Tokyo University DASSK speech
မင်းအောင်လှိုင်နှင့်သက်ဆင်တို့ ပြင်ဦးလွင်မြို့၌ တွေ့ဆုံ
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်တို့ ပြင်ဦးလွင်မြို့၌ တွေ့ဆုံ
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်နှင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့၌ ဧပြီလ ၁၆ ရက်က တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်၏ ဖေ့ဘွတ်စ် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားချက်အရ သိရသည်။
တွေ့ဆုံမှု အသေးစိတ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆင်က ရေးသားထားခြင်း မရှိဘဲ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အား ၎င်းက သပြေခက်ဖြင့် ရေပက်နေသည့်ပုံကို ၎င်း၏ ဖေ့ဘွတ်စ်စာမျက်နှာတွင် တင်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ထို့ပြင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား သွားရောက် တွေ့ဆုံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်းနှင့် မြန်မာနှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်ပွဲတော်ကိုလည်း ဆင်နွှဲခွင့် ကြုံရသည့်အတွက် ၀မ်းသာမိပါကြောင်း ထိုင်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
သက်ဆင်က ၎င်းအနေဖြင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့သို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်ပြီး ရာသီဥတုကိုလည်း အ လွန် နှစ်သက်ကြောင်းနှင့် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်ခဲ့ကြကြောင်း ရေးသားထားသည်။ သက်ဆင်သည် မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အား ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလကလည်း နေပြည်တော်သို့ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖော်ဆောင်နေသော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ၊ အာဆီယံ၏ အနာဂတ်နှင့် ဒေသတွင်းကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် လက်ရှိထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်လက်ရှင်နာဝပ်၏ အစ်ကိုဖြစ်သူ သက်ဆင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ထားဝယ်သို့ ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၂၁ ရက်ကလည်း ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်ဖြင့် လာရောက်ခဲ့ပြီး ထိုသို့လာရောက်ရာတွင် ထားဝယ်မြို့နယ်၊ မောင်းမကန်ဒေသရှိ မောင်းမကန် ဘုတ်ကျွန်းနှင့် လောင်းလုံ ဘုတ်ကျွန်းများသို့ သွားရောက်ခဲ့ကာ မတ်လ ၂၂ ရက် နံနက် ၈ နာရီတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ခရီးစဉ်အတွင်း ၎င်းသည် ထိုင်းကုမ္ပဏီက ဦးစီးလုပ်ဆောင်နေသည့် ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းသို့လည်း သွားရောက်ခဲ့ပြီး ယင်းရေနက်ဆိပ်ကမ်းတွင်ပင် ညအိပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သက်ဆင် လာရောက်လေ့လာသည့် ကျွန်းများအား စင်ကာပူလုပ်ငန်းရှင်များကလည်း အပန်းဖြေစခန်း တည်ဆောက်ရန် စိတ်ဝင်စားမှုများ ရှိနေကြောင်း ဒေသခံများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
The FBI on Thursday, April 18, released photos and video of two men it called suspects in the deadly bombings at the Boston Marathon and pleaded for public help in identifying them. The two men were photographed walking together near the finish line of the marathon before the explosions that killed three people and wounded about 180.
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ဖို့ ပါတီတွေနဲ့ ကော်မရှင်တွေ့မည်
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ပြုလုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ပြုလုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲစာရင်းကိစ္စတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါတီတွေရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေတွေကို ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလို တွေ့ဆုံရာမှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေအပြင် ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ တရားဝင်ပါတီအဖြစ် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)နဲ့ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့ကိုပါ ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ကြားထားပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီတွေအပြင် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လူမှုရေးအဖွဲ့တွေကိုလည်း ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ကြားထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုးအာဘေး (Shinzo Abe ) နှင့် တွေ့ ဆုံ
Thursday, April 18, 2013. (AP Photo/Issei Kato, Pool)
Day(6) Suu 's trip in Japan
၁၈ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်လေ့လာနေသောဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ရှိ Panasonic Center showroom
Panasonic Corp. Chairman Fumio Ohtsubo shake hands as Suu Kyi
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အမြင့်မားဆုံးအဆောက်အဦဖြစ်သည့် တိုကျိုစကိုင်းထရီးမျှော်စင်ကြီးပေါ်သို့ ဧပြီ ၁၈ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်လေ့လာ
Japan National Press Clubမှာ
17ရက်နေ့ ညနေ ၅နာရီ ၄၂မိနစ်က Japan National Press Clubမှာ ပြုလုပ်တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲနှင့် တိုကျိုတက္ကသိုလ် ရုပ်သံ...
PSY ၏ Gentleman M/V အား တောင်ကိုရီးယား KBS ရုပ်သံလ...
ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာ ချပေးထားတဲ့ ခွဲတမ်းက ၁၀ လုံး/လိုချ...
ဓါတ်ပုံရှင်နဲ့ဆိုင်ကယ် သိသူများ ရဲ ထံ ဆက်သွယ်ပေးြ...
မင်းအောင်လှိုင်နှင့်သက်ဆင်တို့ ပြင်ဦးလွင်မြို့၌ တေ...
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ဖို့ ပါတီတွေနဲ့ ကော်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုးအာဘေး ...